Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya oo ka hadlay Xaalada Sheekh Xasan Daahir Aweys Digniin adagna soo saaray | warsugansomaliya.wordpress.com
warsugansomaliya / July 2, 2013
Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qaranka Soomaaliya C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa markii ugu horeesay ka hadlay Xaalada xiligan uu ku sugan yahay Sheekh Xasan Daahir Aweys oo gacanta ugu jira Dowlada iyo dhibkii la gaarsiiyay odayaashii iyo Xubnihii kale ee Cadaado ka keenay Wadaadka.
Wasiirka ayaa xusay in Xaalada Sheekh Xasan Daahir Aweys ay hada tahay mid caadi ah ayna Dowlada Soomaaliya ku heyso goob amaan ah loona geeyay Dhaqaatiir caafimaad oo xaaladiisa wax badana kala socota.
C/Kariin Xuseen Guuleed ayaa sidoo kale ka hadlay Warar soo baxayay oo sheegayay in Sheekh Xasan Daahir Aweys xubno ajaaniib ah loo dhiibay waxa uuna hadalkaasi ku tilmaamay mid been abuur ah oon waxba ka jirin Sheekhana uu Dowlada gacanta ugu jiro.
“Xasan Daahir waxaa uu ku jiro gacanta dowlada, ajnabi looma dhiibin, loomana dhiibayo, meel amaan ah oo hagaagsan ayuu joogaa, wax dhibaato ma qabo, waxaan u geynay dhaqaatiir xaaladiisa caafimaad la socota aad buuna u fiican yahay” Wasiirka Arimaha Gudaha iyo Amniga Qarabka Soomaaliya C/Kariin Xuseen Guuleed.
Wasiirka ayaa dhinaca kale la tacsiyeeyay Dhacdadii ay Ciidanka Nabad Sugida Soomaaliya kula kaceen Odayaal iyo Saraakiil Magaalada Cadaado kasoo ka xeeyay Sheekh Xasan Daahir waxa uuna xusay dhibkaas dhacay in ay ka xun yihiin uuna ku dhacay si qalad ah ayna raali galin ka bixinayaan.
Wasiirka ayaa dhinaca kale ku baaqay in la joojiyo hadalada kicinta ah ee shaqsiyaadka qaar ay bulshada ka dhex wadaan si khal khal loo geliyo amaanka iyo xasiloonida, isagoo tilmaamay in dowladu aysan u dulqaadan doonin arrimaha noocaas ah.
“Marnaba dowladu uma dulqaadaneyso shaqsiyaadka warxuma tashiilka iyo kicinta ka dhex wada bulshada, iskuna dayaya arrimo nabada, xasiloonida iyo dowladnimada khal khal gelinaya, waana in laga waantoobaa dowladana looga dambeeyaa xaalad kasta oo soo kororta” ayuu intaa ku daray wasiirka.
Hadalka kasoo baxay Wasiirka Arimaha Gudaha Soomaaliya ayaa noqonaya kii ugu horeeyay ee si rasmi ah uga soo baxa Wasaarada Arimaha Gudaha Soomaaliya loogana hadlay Xaalada Sheekh Xasan Daahir Aweys iyo dhibkii loo geestay Odayaashii Cadaado ka keenay Sheekh Xasan Daahir Aweys.
July 2, 2013 in Home.
← Daawo Sawirada Xabsigii uu ku Xirnaa Nelson Mandela iyo Madaxweyne Obama iyo Qoyskiisa oo booqday Xabsigaasi
Dhacdo Naxdin Leh lamaane aad isku Jeclaa noloshooda oo mar qura dhintay iyaga oo isku dhagan →